Baqhanqalazela ukungabinambane abahlali base Strand – Elitsha
26th September 2017 Unathi TutaCape Town, Iyavela, Oorhulemente basemakhaya, Uncategorised 0 Xhosa
Ngexesha bekuqhanqalazwa kuvalwe uhola wendlela u N2 ngase Lwandle ngoMvulo. Ithatyathwe ngu Unathi Tuta
Ngabantu abathathu abaye bafumana umonzakalo logama ishumi elinesithoba libanjiwe ngamapolisa, kubahlali bengingqi zogobityholo ezingqonge iStrand.
Ngomvulo umhla wama24 kweyoMsintsi abahali bangene ezitalatweni betshisa amatayala kuhola wendlela uN2, besithi bafuna ukuvakalisa kwisixeko seKapa ukungaxoli kwabo ngokungafakelwa umbane. Inkokheli yabahlali bengingqi base Pholile uMwezi Lugwali uthi “siqonde ukuba olwethu usuku lwenkcubeko masilubhiyozele ngoqhankqalazo kuba kudala silindile. Isixeko seKapa sisihlisa sisinyusa into engenzekiyo yile siyifunayo yokufakelwa umbane”.
USiyabonga Dolingana ohlala kwingingqi Pholile uchaze ngendlela ebunzima ngayo ubomi ngaphandle kombane. Uthi “ siyasokola ukwenza izinto ezininzi ngenxa yokungabi nambane, kwinyanga ka Tshazimpunzi iyodwa nje kubhubhe abantu abasibhozo apha. Kuqale kwabhubha usapho lonke onumalungu amathandathu kwasweleka ikwekwana eyayidlala emfuleni kanti kukho intambo zombane ezivele ngaphandle kwaphinda kwasweleka indoda eyayizama ukutsala umbane ngokungekho mthethweni. Ingxaki yombane inkulu kakhulu”, ulebele ngelitshoyo loka Dolingana.
Nangona kunjalo ilungu lekomiti kasodolophu uAnda Ntsodo uthi bothukile luqhankqalazo lwababahlali kuba babexelelwe umbane bakuwufakelwa ekuqaleni kunyaka ozayo.
“Umhlaba abakuwo ababantu wawufudula ungowearhente yezendlela iSANRAL, kuthe kwakufikelelwla kwisivumelwano sokuba isiXeko singawusebenzisa, inkonzo ezingundoqo ezizezinye bazifumana ezifana namanzi acocekileyo,inkonzo zokuthuthwa kwenkukuma namagumbi angasese. Ukufakelwa kombane kufuna injineli kwaye zasixelela ukuba kungathatha inyanga ezintandathu ukuqwalasela ukuba ipali kwanezitalato ozakuhamba kuzo zizakuba ndawoni na. Yonke lengxelo abahlali sasibanikile, siyakrokra abanikwa ulwazi olufanekileyo ngenjongo”.
Kuqhankqalazo lwabahlali kubanjwe abalishumi elinesithoba logama abathathu bayebabalekiselwa esibhedlele emva kokufumana umonzakalo
Inkonzo zorhulemente wamakhaya